Fanadihadiana : tsy ampy mangarahara ny tetibolam-panjakana - ewa.mg
Fanadihadiana : tsy ampy mangarahara ny tetibolam-panjakana
News - Fanadihadiana : tsy ampy mangarahara ny tetibolam-panjakana
ny fangaraharan’ny tetibolam-panjakana eto Mada­gasikara sy ireo
manana andraikitra amin’ny fanaraha-maso. Fanontaniana 145 ny
naroson’ny manampahaizana mahaleo tena momba ny toekarena,
fanadihadiana manodidina ny fangaraharan’ny tetibolam-panjakana
Nanaovana tombana izay
fangaraharan’ny tetibolam-panjakana izay eto Madaga­sikara (EBO)*
ka namoahana valin’ny fanadihadiana ny tetikasa na ny fandaharanasa
sy ny vanim-potoana mifandraika amin’izany hatramin’ny 31 desambra
2018 momba ny fangaraharan’ny tetibolam-panjakana 2019. Miara-miasa
manatanteraka ny fanadihadiana ny manampahaizana mahaleo tena
ivelan’ny fanjakana miaraka amin’ny so­lontenan’ny mi­nisiteran’ny
Toekarena sy ny tetibola. Mangarahara, anisan’ny fepetra takin’ny
mpi­ara-miombona antoka mpamatsy vola ho fanta-bahoaka.
Mifantoka amina teboka telo ny valin’ny fanadihadiana nanomezana
isa an’i Ma­da­gasikara: ny fahitan’ny va­hoaka ny mangarahara
mom­ba ny tetibola ampiasana (40/100), ny fahafahan’ny vahoaka
mandray anjara amin’ny famolavolana ny tetibola (6/100) ary ny
rafitra mpanara-maso (35/100). Nomari­hin’ny fiarahamonim-pirenena
MSis Tatao fa mitombo ny isa azon’i Madagasikara raha oharina ny
tamin’ny 2017, 34/100. Na izany aza, mbola ambany be ireo isa ireo,
izay 61/100 ny salanisa ambany indrindra. Raha i Madaga­sikara
manokana, voasokajy ho misy mangarahara, saingy ambany
Tsy mandray anjara
mivantana ny solombavambahoaka
Nomarihin’ny IBP* fa tsy manome
vaovao ampy mom­ba ny tetibola ny ankamaroan’ny fitondram-panjakana
aty Afrika. Na misy fivoriana momba ny tetibolam-panjakana eo
anivon’ny Anteni­miera, tsy mampandray anjara mivantana ny
solombavambahoaka ny eto Madaga­si­kara, tsy ahafahana
miara-midinika ny amin’izay sehatra tokony ho laharam-pahamahena
hanokanana tetibola matanjaka.
Zava-dehibe ny fahafantarana ny tetibola raha mifandraika marina
amin’ny politika nambaran’ny fanjakana, ohatra, tetibola ho an’ny
faritra na ny kaominina lavitra. Ilaina ny fangaraharana ny
fitantanana amin’izao krizy ateraky ny Covid-19 izao, izay misy
akony lehibe eo amin’ny toekarena ny fahaiza-mitantana.
EBO* : Enquête sur le budget
IBP* : International budget partnership
L’article Fanadihadiana : tsy ampy mangarahara ny tetibolam-panjakana a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 03/10/2020
« Hetraonline »: ho fanatsarana ny fampidiran-ketra
Manao ezaka goavana ny Foibem-pitantanana ny hetra (DGI), manaraka ny fivoaran’ny teknolojia. Nametrahana « logiciel Safira » ny ao amin’ny Ivonketra boriborintany faha-V, Antananarivo Renivohitra, ho fampiharana izany.Hahamora ny fifandraisana amin’ny mpandoa hetra, ho fanatsarana ny fampidiran-ketra, ny ampiasana voalohany ao amin’ny Ivonketra boriboritany faha-V, Amboditsiry ny « logiciel Safira ». Tsy mifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny intsony ny « Surf » sy ny « Sigtas » ka izao soloina “Safira” izao, hapetraka miandalana any amin’ny Ivonketra rehetra manerana ny Nosy. Zava-dehibe amin’ny fampiharana azy io ny fahazoana manao fanambaran-ketra na aiza na aiza, na « Hetraonline ».Amin’izao fivoaran’ny serasera izao, tsy vitsy ny afaka mampiasa solosaina ahafahana miditra amin’ny « Hetraonline ». Hita ao avokoa amin’ny fotoana rehetra, rehefa mahazo « code » ny tokony hatao sy ny fipetraky ny hetra tokony haloa sy ny fomba fandoavana izany. Misy ny fampianarana manao izany omen’ny DGI. Ao anatin’ny fotoana fohy, vita ny fanambaran-ketra sy ny fandoavana azy, tsy milahatra intsony any amin’ny biraon’ny hetra.Fomba entina miady amin’ny kolikolyFomba iray entina miady amin’ny kolikoly koa izao sy isorohana ny kajy nataon’ny mpiasa teo aloha ka mety hafa aty aoriana. Ny amin’ny “Safira”, tsy misy tarehimarika azo soloina fa mipetraka mazava, samy afaka manaraka izany, ny fanjakana na ny mpandoa hetra. Hita ny fe-potoana farany sy ny sazy miandry aorian’izay fe-petoana izay, ny vola sisa tsy voaloa, sy izay tarehimarika hafa rehetra. Manamora ny fifandraisana amin’ny mpandoa hetra izany amin’ny maha matihanina ny asa.Hetra tambatra (impôt synthétique) amin’ny ankapobeny ny mandalo amin’ny Ivonketra toy ny ao amin’ny boriboritany faha-V, Amboditsiry. Ho an’ireo orinasa mampiasa vola latsaky ny 200 tapitrisa ariary ny hetra tambatra. Ho an’ireo orinasa lehibe kosa, hanomboka amin’ny oktobra 2019 ny “Hetra e-paiement”, tsy mandany fotoana loata intsony amin’ny fanambarana vola miditra, TVA …. “Fanentanana ny olom-pirenena handoa hetra izao. Tanjona ny hampitombo ny tahan’ny fidiran-ketra 12,5 % na 12,8 % amin’ity taona ity, raha 12,2 % ny taona 2018”, hoy ny talen’ny DGI, Germain.R.MathieuL’article « Hetraonline »: ho fanatsarana ny fampidiran-ketra a été récupéré chez Newsmada.
Praiminisitra Ntsay Christian: “Mila mahay mifampihaino isika Malagasy”
“Tsotra ny zava-dehibe ao anatin’izy io: tsy maintsy mahay mifampihaino isika samy Malagasy. Be dia be ny vondrona politika na antoko politika no miteny fa misy zavatra tokony hohatsaraina amin’ny fikarakarana ny fifidianana.”Io ny valin-tenin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, teny Tsimbazaza, omaly, momba ny fanatanterahana ny fifidianana ben’ny Tanàna. Ao anatin’izay fikarakarana fifidianana izay ny lisitry ny mpifidy. Tsy maintsy mijery sy mandanjalanja ny amin’izany ny fitondram-panjakana.Tsy tokony hohadinoina fa tapitra alohan’ny faran’ny taona ny fe-potoam-piasan’ny ben’ny Tanàna eto amintsika. Efa voalazan’ny filohan’ny Repoblika fa eo am-pandinihana izany ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao.Tolo-dalàna ny momba ny satan’ny mpanohitra“Tolo-dalàna ny momba ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana”, hoy izy momba ny handinihan’ny parlemanta ny lalàna momba izay. Noho izany, ireo solombavambahoaka ihany no mitondra izay. Ireo solombavambahoaka no mahita ny fanovana tian-dry zareo hatao amin’ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana. Efa nanome ny heviny momba azy ny governemanta, ny 7 aogositra lasa teo.Rariny sy hitsiny ny fangatahan’ny filohan’ny Antenimierampirenena ny amin’ny tokony hanaovana antsipiriany ny fandaharanasan’ny governemanta amin’ny fanoloran’ny praiminisitra izany, araka ny nambarany. Mba hahazoan’ireo solombavambahoaka manara-maso ny fanatanterahana ny fandaharanasa amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) izany.Efa niomana ho amin’izany ny governemanta, ka tsy misy olana ny momba an’izay. Izay no andrasan’ny rehetra. Na izany aza: “Tsy maintsy mitandrina kely ihany isika, sao lasa 5 na 6 ora ny hamelabelarana izany ka manahirana”, hoy izy.R.Nd.L’article Praiminisitra Ntsay Christian: “Mila mahay mifampihaino isika Malagasy” a été récupéré chez Newsmada.
Niresaka ny olana sedrain’ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara tamin’ny Ambasadaoron’i Etazonia, Michael Pelletier sy ny tale jeneralin’ny fandaharanasa amerikana ho an’ny fampandrosoana (USAID), John Dunlop ary ny talen’ny fandraharahana Rakotoniaina Marina ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena, Fiompiana sy Jono, omaly. Hijery ny hampidirana ny tantsaha amin’ny tsena vaovao eto an-toerana sy ny tsenam-paritra ary iraisam-pirenena izy ireo. L’article Fiaraha-miasa est apparu en premier sur AoRaha.
Mandritra ity volana aogositra ity no hankalazana ny volan’ny vehivavy aty atsimon’i Afrika. Amin’ny alalan’ny fitetezana an’ireo andrim-panjakana eto Madagasikara no entin’i Baleka Mbete, sekretera jeneralin’ny Kaongresim-pirenena Afrikanina (Anc) hanamarihana izany, amin’izao fotoana izao. Nisy ny fihaonana tamin’ireo loholona vehivavy miasa ao amin’ny Antenimierandoholona tetsy Anosikely, afak’omaly. Nifanakalo hevitra sy nifampizara traikefa amin’ny fomba fanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra sahanina amin’ny maha tompon’andraiki-panjakana ambony azy ireo ny roa tonta. Omaly kosa io sekretera jeneralin’ny Anc io no nitsidika tamin’ny fomba fifanajana ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Rakotovao Rivo. L’article Fifampizarana traikefa est apparu en premier sur AoRaha.
Boriborintany I: nodiovina ny lakandrano 500 m
Mampidi-dranonketsa ny tantsaha eny Ankasina sy Andohatapenaka II sy III, amin’izao volana aogositra izao. Hanamora izany fampidiran-drano izany, nikarakara hetsika fanadiovana ireo lakandrano fampidirana rano hambolena niaraka tamin’ny Boriborintany voalohany ireo fikambanan’ny mpamboly sy ireo RF2, ny faran’ny herinandro teo.Araka ny nambaran’ny lefitra faharoan’ny delegen’ny Boriborintany voalohany, Razanadrakoto Heriniaina, tototra fako sy loto ny lakandrano famatsiana rano ho an’ireo fambolena eny amin’ny faritra Ankasina, Andohatapenaka I sy II kanefa dia mamokatra sakafo hohanina no vatsin’ity lakandrano ity.Noho izany, nandray andraikitra ny kaominina amin’ny fanentanana ny rehetra amin’ny tsy hanariana rano maloto sy fako eny amin’izany lakandrano izany.Tokony hofadina ihany koa ny manasa lamba sy ny manary maloto any anatin’itony lakandrano itony. Ankoatra izay, nanentana ihany koa ity tompon’andraikitra ity ny hijeren’ireo mponina manokana ny RF2 eny anivon’ny fokontany, izay miezaka ny manadio sy manala ireo fako isan-tokantrano. Mirefy 500 metatra eo ho eo ity lakandrano nodiovina ity . Mandrora mitsilany ihany ireo mponina eny an-toerana ka izany indrindra no anton’ny fanentanana.Tatiana AL’article Boriborintany I: nodiovina ny lakandrano 500 m a été récupéré chez Newsmada.
Kaominina Ifotaka sy Tsivory: nizara masomboly, moto pompe sy fitaovana ny fikambanana Fitia
Nanampy ny vehivavy hahaleo tena ara-tsakafo ao Ifotoaka hisorohana ny kere ka nanome fitaovana azy ireo ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy. Nitondra ny anjara biriky hanohanana ny fianakaviana sahirana noho ny haintany sy ny kere ny fikambanana Fitia, nanomboka omaly. Kaominina roa Ifotaka sy Tsivory, distrika Amboasary Atsimo no niompanan’ny fanampiana niaraka amin’ny filohan’ny fikambanana, Rajoelina Mialy sy ny zanany lahimatoa Rajoelina Arena. Nanome fitaovam-pambolena sy masomboly maro karazana miraka amin’ny fitaovana fahazoan-drano (moto pompe) ho an’ny vehivavy izy hahazoan’ny isan-tokantrano sakafo. Aorian’ny enim-bolana hambolena ireo masomboly ireo, hioty ny vokatra ny olona 400 000 ka hisitraka sakafo mahavelona, hoy ny fanazavan’ny vadin’ny filoham-pirenena tamin’ireo mponina tao amin’ny kaominina Ifotaka. Vokatra mamaly ny toe-tany sy ny filan’ny vahoaka no natolotra hamongorana ny kere. Nahazo akanjo koa ny ankizy tamin’ny fandalovan’ny ekipa. Hatao maodely amin’ny ady ialana amin’ny kere ny ao Ifotaka satria efa mametraka paikady goavana ny fitondrana : fanomezana tany, fitarihana rano hambolena ary fanofanana ny tantsaha. Nanatsatoka fototra mangahazo niaraka Rajoelina Mialy sy ny zanany lahy.Ho an’ny Tsivory, nanomana sakafo masaka ho an’ny olon-dehibe 1000 sy koba hozaraina amin’ny ankizy 500 mahery mandritra ny 15 andro ny fikambanana Fitia. Nomena akanjo ihany koa ny kilonga madinika. Ny sakafo hohanina no tena olana ho an’ny mponina ao Tsivory nefa mahavokatra ihany ny tany, hoy ny ben’ny Tanàna. Ireo masera ao an-toerana no manome sakafo ny mponina indraindray.Nitsidika ireo zokiolona roa samy marary koa ny filohan’ny fikambanana Fitia ary nampanantena milina fanjairana ho an’i Miza Elisabeth renim-pianakaviana iray mpanjaitra ny vadin’ny filoha.Vonjy A.L’article Kaominina Ifotaka sy Tsivory: nizara masomboly, moto pompe sy fitaovana ny fikambanana Fitia a été récupéré chez Newsmada.
Miisa 31 ny tranga vaovao: tafakatra 251 ireo lavon’ny Covid-19
Miisa 31 ireo nifindran’ny valanaretina teo anelanelan’ny 14 hatramin’ny 18 novambra teo. Nisy iray namoy ny ainy indray.Anisan’ny misongadina amin’izany ny any Matsiatra Ambony, ahitana tranga vaovao miisa 13 raha enina ny eto Analamanga. Miisa telo ny any Atsinanana raha iray avy ny any Vatovavy Fitovinany sy any Sava. Roa kosa ireo tranga vaovao any raha dimy ny any Diana. Tany amin’io faritra io koa ny iray lavon’ny Coronavirus. Tafakatra 251 izany izao ireo matin’ny valanaretina eto amintsika, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.Miisa 433 ireo mbola manaraka fitsaboanaNa izany aza anefa, miisa 65 ireo sitrana ka maro anisa amin’izany ny eto Analamanga, miisa 19, raha 17 ny any Alaotra Mangoro ary 10 kosa ny any Diana.Tafakatra 16 657 izany izao ireo nahafeno ny fepetra, sitrana sy efa nody amin’izao ho an’ireo mitondra ny tsimokaretina miisa 17 341. Mbola misy 433 kosa anefa ireo manaraka fitsaboana sy arahi-maso ny toe-pahasalamany. Miisa 93 734 ny fitambaran’ny fitiliana vita. Tsiahivina fa miisa 87 ireo tranga vaovao, teo anelanelan’ny 8 sy 13 novambra ary iray kosa lavo.Synèse R.L’article Miisa 31 ny tranga vaovao: tafakatra 251 ireo lavon’ny Covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Efa mpamerin-keloka: niharan’ny hatezeram-bahoaka ilay mpangalatra
Tra-tehaky ny fokonolona teny Fasan’ny Karana ny mpangalatra iray, afakomaly maraina. Nanararaotra ny tsy naha teo ireo tompon-trano ralehilahy ka niditra antsokosoko. Araka ny fantatra, voapitsok’ilay lehilahy ny fanalahidin’ny trano ka tafiditra izy. « Taorian’izay, nalainy avokoa ny kojakojan-dakozia sy ny entana maro samihafa toy ny “lecteur » sy bodofotsy ka nataony tao anaty gony », hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Nisy nahatsikaritra anefa ity farany ka nisy nanidy ny vavahadin’ilay trano. Vokany, tsy tafavoaka ralehilahy ka noraisim-potsiny. Voasambotry ny fokonolona izy ka niharan’ny hatezeram-bahoaka. Tonga teny an-toerana ny polisy nisambotra azy. Henintsoa HaniL’article Efa mpamerin-keloka: niharan’ny hatezeram-bahoaka ilay mpangalatra a été récupéré chez Newsmada.
Appel à manifestation d’intérêt (UGP CASEF / 2014A)
Cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le document. AMI_n°_33-20_CASEF-_CER_Boeny_171120 (1) L’article Appel à manifestation d’intérêt (UGP CASEF / 2014A) est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Appel à manifestation d’intérêt (UGP CASEF / 2014A) a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Hatao any Toamasina ny “Judo Tour” andiany fahatelo
Hetsika iray hanamarihana ity taom-pikatrohana 2020 ity no sady tsy hahataona fotsy izany, ny andiany fahatelo amin’ny “Judo Tour”, karakarain’ny klioba Atrika, ligin’Atsinanana, taranja Judo. Ny 26 hatramin’ny 30 novambra izao ny hanatanterahana izany any Toamasina. Araka ny fanazavan’ny mpitantana ny klioba, Raoelison Annie, misokatra ho an’ny ligy rehetra manerana ny Nosy ity hetsika ity ary natokana ho an’ny ankizy latsaky ny 15 taona. Araka ny fandaharam-potoana, karazana “Camp d’entrainement” sy fanabeazana ny resaka tontolo iainana ny hatao mandritra io fotoana io. Teknisiana malagasy manana ny maha izy azy ny hitarika, ireo ankizy, mandritra izany, hahitana an-dRasoanaivo Razafy Luc, i Elie Norbert ary Ralevazaha Emy.Afaka misoratra anarana eny anivon’ny ligy misy azy avy ireo mpikatroka, raha ny fanazavana ary efa nanomboka izay fisoratana anarana izay. Tsiahivina, isan’ny tetikasan’ny klioba hatramin’izay ity hetsika iray ity. Mi.RazL’article Hatao any Toamasina ny “Judo Tour” andiany fahatelo a été récupéré chez Newsmada.
La slameuse- danseuse Makwa Joma au sommet de son art. Makwa Joma a été sélectionnée parmi les 35 jeunes africains les plus talentueux pour bénéficier des prix Africa 35.35 qui célèbrent l’excellence et le mérite de la jeunesse africaine et de l’Afro-diaspora. L’information a été donnée jeudi 12 novembre dernier. La jeune femme malgache a eu le mérite d’être choisie parmi plus de 500 candidats africains en Afrique et dans la diaspiora âgés de 16 à 35 ans. Les 35 jeunes sélectionnés sont porteurs de projets et de réalisations exceptionnels dans leurs communautés. L’objectif de ce prix est de reconnaître les mérites des jeunes africains d’au plus de 35 ans toutes les années. Institués en 2016, les prix 35.35 sont à leur cinquantième édition consécutive. Ils sont organisés toutes les années pour célébrer les meilleures innovations des jeunes africains. Les prix 35.35 sont une initiative d’une organisation panafricaine de jeunes professionnels présents dans 30 pays africains. L’année 2020, la plupart des artistes sont pris dans une situation de vulnérabilité à cause de la crise sanitaire due au Covid-19. Malgré les suspensions des évènements culturels à Madagascar, Makwa Joma n’a pas pris ce moment comme une récréation, au contraire, elle le prend comme un défi. Comme tous les autres artistes, elle a traversé des moments difficiles mais avec son courage et ses créativités durant le confinement, à travers des appels à candidature en ligne. Les mois de Juin elle est la lauréate du concours de projet « demain sera mien » organisé par le Fond de Dotation HY, mois d’août elle est lauréate de l’appel à projet SOFOCO organisé par Africa Culture Fund avec son projet « ose à oser » avant d’être parmi les artistes le plus inspirants du continent noir dont elle a gagné le prix 35.35. Ambitieuse, la jeune femme envisage de réaliser un autre projet pour promouvoir la culture malgache. Iss Heridiny L’article Prix Africa 35.35 : Makwa Joma parmi les 35 lauréats est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Prix Africa 35.35 : Makwa Joma parmi les 35 lauréats a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Haintrano tao amin’ny oniversiten’Antsiranana: mpianatra iray maty, olona roa hafa naratra
Niredareda ny afo tao amin’ny oniversiten’Antsiranana, ny sasakalin’ny asabotsy hifoha alahady teo. May tamin’izany ny trano fonenan’ny mpianatra ao an-toerana. Vokany, rava avokoa ny fotodrafitrasa vitsivitsy. Tovolahy mpianatra iray ao amin’ny taona faharoa, maty vokatry ny loza. Mpianatra roa hafa koa naratra mafy. Araka ny fanadihadiana, « court-circuit » ny nahatonga ny loza sy nitarika ny fahavoazana. Ao koa ireo nanazava fa nitsonika ny taribin-jiro fitsilovana teny ambonina tilikambo. Antony nipoiran’ny afo izany. Nikoropaka ny rehetra raha vantany vao niseho ny loza, tsy tafavoaka tamin’izany kosa anefa ny tovolahy iray vao 22 taona, mpianatra ao amin’ny taona faharoa ny « faculté des sciences » ao an-toerana. Vokany, sempotra tsy tafavoaka ilay trano may izy ka may sy namoy ny ainy. Ireo naratra mafy kosa, nalefa vonjimaika ao amin’ny hopitaly ao Antsiranana.Naharitra manodidina ny 3 ora ny fahamaizana ka nandravarava ireo fotodrafitrasa sy ireo fitaovana ao amin’ny oniversite. Raha ny tatitra navoakan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, maherin’ny 60 ireo traboina. Henitsoa HaniL’article Haintrano tao amin’ny oniversiten’Antsiranana: mpianatra iray maty, olona roa hafa naratra a été récupéré chez Newsmada.
Tolo-tanana ho an’i Piff « Iray aina, iray rap », hetsika tolo-tanana ho an’i Piff, tojo tsy fahasalamana, hotanterahina etsy amin’ny Noumba Club Itaosy (ex Guest House), anio asabotsy, manomboka amin’ny 10 ora maraina. Maro ireo haneho ny talentany, toa an-dry Mamy Saya & Alkassim, 08MM, Miora Killah&Ratex, Slem (Bogota), 67 Squad, 102 Fassad, Xcrew, Mista&Boska, Dahalo, Kriminaly, Etika, Familia, Reen-Key, Gouvernigga, Syndikat Kaid, Map, architek.NarilalaL’article Taratry ny kanto a été récupéré chez Newsmada.
“Tournoi Est”: hanomboka rahampitso ny fifaninanana
Araka ny efa nampanantenain’ny fikambanana “Espoirs Sportifs de Tuléar”, hisy ny hetsika ara-panatanjahantena karakaraina mialoha ny faran’ny taona. Araka ny tapaka, hanomboka rahampitso 21 novambra io fifaninanana mitondra ny anarana hoe “Tournoi Est”. Sokajy maromaro, hahitana ny Vétéran lahy sy vavy, sokajy latsaky ny 18 taona, 16 taona, 14 taona lahy sy vavy ary ny “Open” lahy sy vavy. Taranja roa dia ny basikety sy ny Hand ball ny hifaninana mandritra izany ka hanasana ireo klioba rehetra maniry ny handray anjara. Araka ny efa notaterina teto hatrany, hetsika fitadiavam-bola hanampiana ny klioban’ny Est hiatrika fifaninanam-pirenena ny kendrena ka misy ny saram-pisoratana anarana. Iray hetsy ariary ny sarany ho an’ny sokajy Vétérans, raha toa ka 3 alina ariary kosa ho an’ny sokajy hafa. Etsy an-kilany anefa, misy kosa ny loka natokana ho an’ny mpandresy amin’ity “Tournoi Est” ity. Ankoatra izao fifaninanana izao, mbola maro ny hetsika karakarain’ny Est mialoha ny faran’ny taona, isan’izany ireo alim-pandihizana miisa roa hatao anio alina sy rahampitso alina ao Toliara. Mi.Raz L’article “Tournoi Est”: hanomboka rahampitso ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.